टीपीएस विषयमा एन.आर.एन.ए. अमेरिका हेल्पडेस्कको 'दोश्रो विज्ञ फोरम' सम्पन्न, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
टीपीएस विषयमा एन.आर.एन.ए. अमेरिका हेल्पडेस्कको 'दोश्रो विज्ञ फोरम' सम्पन्न
विश्वमान आङ्गदेम्बे, कार्यक्रम संयोजक, विज्ञ फोरम, अमेरिका। यही जुन १० तारिख आइतवार साँझ अमेरिकाको न्यूयोर्कमा ' एन.आर.एन.ए. अमेरिका हेल्पडेस्क' को दोश्रो मासिक कार्यक्रम 'विज्ञ फोरम-२' सम्पन्न भएको छ।
चर्चित नेपाली अमेरिकी कानूनी अधिवक्ता विनोद रोका 'विज्ञ वक्ता' रहेको उक्त कार्यक्रम वर्तमान 'टीपीएस' विषयमा केन्द्रित थियो। कार्यक्रम 'एन.आर.एन. न्यूयोर्क च्याप्टर' अध्यक्ष रामहरि अधिकारीको नेतृत्वमा 'न्यूयोर्क च्याप्टर' तथा 'न्यूयोर्क हेल्पडेस्क' सँगको सहकार्यमा सम्पन्न भएको थियो।
कार्यक्रमको संचालन चर्चित पत्रकार किरण मरहट्टाले गरेका थिए भने कार्यक्रम विभिन्न नेपाली अमेरिकी 'अनलाइन' मिडियाबाट 'फेसवुक लाइभ' गरिएको थियो। कार्यक्रममा अधिवक्ता विनोद रोकाबाट निम्न मुख्य जानकारीहरु भएका थिए।
(१) नन-इम्मिग्रेसन भिसा: जुन २४, २०१९ मा टीपीएस सकिनु अगावै 'नन-इम्मिग्रेसन भिसा' (विद्यार्थी, पर्यटक, ग्रीन कार्ड, आदि) मा हरेक भिसाको मापदण्ड पूरा गरेर जान सकिन्छ। ग्रीन कार्डको हकमा कुनै कम्पनीको 'स्पोन्सर' मा 'लेबर सर्तिफिकेसन' बाट फाइल गर्न सकिन्छ तर त्यसको लागि विगतमा 'स्टेटस बाहिर' भएको भए त्यो १८० दिन भन्दा कम हुनुपर्छ।
(२) प्रवेष निषेध: १८० दिनभन्दा बढी र १ वर्षभन्दा कम 'स्टेटस बाहिर' भए अमेरिकामा कम्तिमा '३ वर्ष प्रवेष निषेध' हुनेछ भने १ वर्षभन्दा बढी भए कम्तिमा '१० वर्ष प्रवेष निषेध' हुने कानून छ।
(३) टीपीएस सकिएपछिका विकल्पहरु: (क) अमेरिकी नागरिकसँग विहे गरेर ग्रीन कार्ड फाइल गर्ने, (ख) 'असाइलम' को मापदण्ड पूरा गरी फाइल गर्ने, (ग) कुनै अपराधबाट पीडित भई फाइल गर्ने, र (घ) विशिष्ठ प्रतिभाशाली व्यक्तित्वको रूपमा फाइल गर्ने। (क) बाहेक अरु सबैमा १८० दिनको हदबन्दी लागू हुन्छ। (क) को हकमा जतिसुकै दिन 'स्टेटस बाहिर' भए पनि ग्रीन कार्ड फाइल गर्न रोक हुँदैन।
(४) 'डिपोरटेसन' अर्डर भएको अवस्थामा: 'डिपोरटेसन' अर्डर जारी भएको तर पछि टीपीएस पाएर 'एडभान्स्ड परोल' लिई अमेरिका बाहिर गई गर्केरा आई अमेरिकी नागरिकसँग विहे गरेर ग्रीन कार्ड पाएको पनि केस छन्। तर, गैर-कानूनी रूपमा सीमा पार गरी आएकाहरुले अमेरिकी नागरिकसँग विहे गरेर ग्रीन कार्ड नपाएको अवस्था छ।
(५) कानूनी विश्लेषण: 'इम्मिग्रेसन विभाग' र 'अदालत' को फरक विश्लेषण पाइएको छ विश्लेषण क्यालिफोर्नियाको 'सर्किट अदालत' ले टीपीएसलाई नै आफैमा एउटा 'नन-इममिग्रांत स्टेटस' मानेको छ भने 'इम्मिग्रेसन विभाग' ले तेस्को फरक 'व्यक्तिको सुरुको स्टेटस' लाई मानेको छ विश्लेषण तेस्तै 'राज्यको अदालत' र स'संघिय अदालत' वीच पनि कानूनी व्याख्यामा फरक छ। 'न्यूयोर्क राज्यको सर्किट अदालत' ले हालसालै पक्राउ परेको 'पिज्जा डेलिभरी' गर्नेलाई उसको अदालतमा उपस्थित हुने दिन सम्म 'डिपोर्ट' नगर्न भने पनि उसले पहिले नै अदालतबाट' 'डिपोरटेसन' अर्डर पाएको अवस्थामा 'इम्मिग्रेसन अधिकारीहरुले' जहिले 'डिपोर्ट' गर्न सक्ने कुरा छ।
(६) ठेगाना परिवर्तन: नन-इम्मिग्रंट्सहरुले आफ्नो ठेगाना परिवर्तन गरेको १० दिनभित्र 'यु.एस.सी.आइ.एस.' लाई जानकारी गराउनु पर्छ, नत्र भने २०० डलर वा ३० दिन जेल सजाय छ।
(७) असाइलम: असाइलमको हकमा १८० दिन भन्दा बढी 'स्टेटस बाहिर' भएको हुनुहुदैन। असाइलम फाइल गर्दा जम्मा ५ वटा समुहमा फाइल गर्न सकिन्छ- धार्मिक, वर्ण, राष्ट्रियता, राजनैतिक, र विशेष समूह (पत्रकार, मानव अधिकारवादी, लेखक, कलाकार, आदि)। यसमा आफूलाई यी मध्ये कुनैपनि वर्गमा परेकै कारणले 'सार्वजनिक पेर्सिकुसन वा दमन वा अपराध' को पीडित हुनु पर्छ। हालैको महान्याधिवक्ता 'जेफ सेसन' को निर्णयले 'घरेलु हिँसा' वा 'व्यक्तिगत पीडा र यातना'को आधारलाई खारेज गरेको छ।
(८) देशबाट निकाला: गैर-कानूनी रूपले अमेरिका छिरेको सीमा देखि १०० माइल भित्र र पार गरेको २ हप्ता भित्र पक्राउ परेको खण्डमा “तुरुन्त डिपोर्ट७त्रगयतस हुनसक्ने व्यस्था छ। २ हप्ता देखि २ वर्ष सम्मको हकमा 'रेगुलर डिपोर्ट' को व्यस्था छ। जुन समयमा कानूनी उपचार खोज्न सकिन्छ। २ वर्ष भन्दा बढीको हकमा 'डिपोर्टको पूर्जी' जारी भई 'स्वयम् फिर्ती' गर्न ४ महिना थप समय प्रदान हुने व्यस्था छ, 'बिना अपराधको केस'।
(९) विवरण फरक परेको खण्डमा: पहिले भर्दा र अहिले भर्दा टीपीएस मा केहि फरक छ। कतिपय कुराहरु पहिलेकै भरेकोले भर्नु पर्दैन क्ष् त्यहीपनि कथम कदाचित रेकर्ड फरक परेमा तेस्को 'जस्टिफाइ' गर्न सक्नुपर्छ, नत्र भने त्यो 'ठगी' मा पर्छ।
(१०) अन्तमास् हरेक केस फरक हुन्छ। हरेक व्यक्तिको अवस्था फरक हुन्छ। कुनैलाई पनि 'जेनेरलाइज' गर्न मिल्दैन। त्यसैले आफ्नो केस राम्रो प्रमाणित क्षेत्र सम्बन्धि कानूनी विज्ञरअधिवक्ता लाई देखाउनु पर्छ। कानूनले प्रमाण खोज्छ र हेर्छ। त्यो पुराउन सक्नुहुन्छ भने आत्तिनु पर्दैन।